Sharaxaada Dabka Bilaashka ah【NAQIIQI IYO KOOBAN】2022
Magacyada Dabka Xorta ah
Haddii aad rabto waxa ugu fiican sharaxaadda dabka bilaashka ah Markaa si kale uma odhan karno, waxaad gaadhay meeshii ugu fiicnayd, sababtoo ah waxaan kuu haynaa tiro badan iyo tilmaamo kala duwan oo kuu noqon doona xaasidnimo kooxdaada oo dhan iyo, shaki la'aan, cadawgaaga.
RIIX HALKAN SI AAD U ARAGTO XEERKA CUSUB EE DABKA OO XORTA AH
Waa sidaas sharaxaadda dabka bilaashka ah waa shay aad muhiim noogu ah ciyaartoy ahaan sababtoo ah maaha oo kaliya shakhsiyaddeena laakiin sidoo kale heerka xirfadeena, muuqaalkan waxaan kaga tagi doonaa qaar iyo hoosta liiska sharaxaadda ugu fiican ee dabka bilaashka ah.
Sharaxaadaha ugu Fiican ee Dab -demiska
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la helo sharaxaad ka dhigaysa kuwa nala tartamaya inay fahmaan cidda aan nahay iyo inaanan halkan u joogin inaan ku warwareegno.
Taasi waxay tidhi, waxaanu kuugu dhaafnay sharaxaadaha ugu fiican ee Dabka Xorta ah ee kan 2021 hoos.
Sharaxaada ugu fiican iyo odhaahyada Dabka bilaashka ah ee kan 2022
Waxaan isku dhiig nahay, isku heer ma nihin
Waxaan rajeynayaa inaad heshay waxaad raadineysay
Waxaan ku caawiyaa safafka
Waxaad uxiisay helitaanka hibadaas wax badan
Sharaxaada Dabka Xorta Ah
Maxaa dhacay, boqorow? Waxay ahayd inaad iga masayrtid, naxariis la'aan
Waxaad heli doontaa dhar iga badan aniga, laakiin waligey ma ahan heerkeyga
Ha codsanin PVP Aad ayaan u yarahay inaan carruur yeesho
Saaxiibkay hore ayaa iga xanuun badan adiga
Nin kale oo dhintey ayaa fiirinaya muuqaalkeyga
Taasi waa sidaan rabay inaan kugu qabto, iyadoo hal gacan ah
Weedhaha waalan ee dabka bilaashka ah
Koontada uu ilaaliyo Chuck Norris
Sidii Vladimir yiri: kubad iyo seexo
Miyay waxyeello weyn ii gaysatay oo aan ku dilay oo aad u timid inaad aragto astaanteyda?
Mararka qaarkood waa inaad hoos u dhaadhacdaa si aad ugu duusho sare, aad uxun waxaan horeyba u qaatay baalashaada
Aniga qaladkeygu ma ahan inaan ku dhashay tan
Asalka asalka John Wick
Hoolka waxaan kuugu dirayaa adiga oo xabad wata
Sharaxaada waalida ah ee dabka bilaashka ah
Magacaagu ma yahay Jorge mise waa maxay sababta uu aadka u xiisaha badan yahay?
Xarigga madaxgeygu wuxuu kudhacayaa mid ka adag MP40-kaaga
Waan ku bari karaa markasta oo aad rabto, lacag badan kama qaado
La dagaallama maskax qabow iyo qalbi gubanaya
Weedhaha Brazil ee dabka bilaashka ah
Ha ku higsan ishaada, ujeedka qalbigaaga
Xidho kabahaaga si aad ii soo gaadho
Aniga oo ilmo yar ah ayaan ku hammiyi jiray in aan duulo maantana waxaan ka degaa diyaaradda
Ma jiro qof magaca 'tamer'
Ma awoodi doono inaan hoos u dhigo dayaxa, laakiin waan yareyn karaa xadka
Haddii aadan qaadan karin muddo dheer, muxuu noqonayaa midka gaaban?
ma rabtaa cookies?
Kaliya fulayaashu gadaal ayey ka weeraraan
sharaxaadda sunta ah ee dabka bilaashka ah
Waad hadlaysaa waadna hadlaysaa laakiin waxaad kaliya dhaawaceysaa jaakadda xabadda celisa
Eyga oo dhulka jooga oo cirka gaadhaya.
PVP wuu kula jiray, maahan gobolka.
Kali ah laakiin ma fududa
Ma waalni, laakiin waxaan ku qoslaa dhibaatooyinkayga.
Saaxiibbo yari, khaa'inno yare
Waxay iigu yeeraan dameer oo aan waxtar lahayn
Anigu waxaan ahay cananaaska Taco-gaagii kaa maqnaa
Taageere kale ayaa i soo booqda
sharaxaad gaaban oo loogu talagalay profile dabka bilaashka ah
Ma waxaad rabtaa inaan ka qosliyo gabadhaada saaxiibkaa ah?
Xitaa qorraxdu ma gubto jaakadda sidaad u badan tahay
Haddaan tago agoonta ayaan ka tagayaa
Hadal badan bay qabtaan laakiin wax yar bay qabtaan
Boqorka dhabta ahi wuu garanayaa goorta uu u qalmo carshiga
Gobolku wuu kaa badan yahay
Diidmada ayaa ragga ka dhigaysa mid adag
Karma way timaaddaa oo tagtaa
sharraxaadda gabdhaha dab-demiska bilaashka ah
Sidee dareemeysaa inaad aragto xirfadle?
Aad uxun waxaan horeyba uheystey liistada oo dhameystiran, hadaanan ku korsan
Qaniimooyinka caadiga ahi way ka sii adag yihiin
Silver ama rasaasta
Waa wax caadi ah eeyaha inay ciyo
Nabadoon Little Angel
Kawaran hadaan samaysanno nin baraf wata?
Tuuryo lagu bahdilay guriga
Ma waxaad tahay vector-ka laba-laabka ah ama maxaan u necbahay?
Adiguna waad walwalsan doontaa
Silsiladdaadu way aamusan tahay
sharaxaada qabow ee dabka bilaashka ah
Ma wax baa kaa lumay?
Xusuusnow in Kiko ka maseyray Chavo oo uusan waxba haysan
Waxaad ii keentaa madaxayga iyo biyo horchata ah
Adigoon ka baqayn guul
Kan ka baqa inuu dhinto lagama yaabo inuu dhasho
Maxaad halkan ka qabanaysaa?
Ma waxaad rabtaa inaan hoos u dhigo darajadaada?
Waad la noolaan kari weyday guuldaradaada oo wey igu soo celisay
Saaxiibtaa iyo hooyadaa igu salaama aniga
Ma isir-nimo mise dameerro?
Waxaad ku socotaa meel xaaraan ah
Magaca Naqshadaynta Dabka Bilaashka ah
Magaca dhaliyaha Dabka Bilaashka ah
Magacyada Qabow ee Dabka Bilaashka ah
Magaca dhaliyaasha Dabka Bilaashka ah
Magacyada Chingones ee Dabka Bilaashka ah
Magacyada Pro ee Dabka Bilaashka ah